moethgyar community club :: Entertainments :: ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ အကြောင်းများ.... :: နိုင်ငံတစ်ကာ ရုပ်ရှင် Share |
Subject: နိုင်ငံတစ်ကာ ရှပ်ရှင်ကားယဉ်ကျေးမှု Sun Feb 01, 2009 10:40 pm
လူမျိုးတိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှု အနည်းဆုံးတော့တစ်ခုစီရှိကြတာပါပဲ အဲဒီလိုပဲအစဉ်အလာ ဆိုတာတွေလဲ ရှိကြတယ် အစဉ်အလာဆိုတာကတော့ ရှေ့ ကလူတွေက ယဉ်ကျေးမှုအပေါ် အခြေခံပြီး တီထွင်ပြုလုပ်သွားကြတော့ နှောင်းလူတွေကလည်း ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဟာလေးတော့ပါရတယ် ဆိုပြီးတောက်လျှောက်လက်ခံပြုလုပ်လာကြခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ အရှင်းဆုံး ဥပမာပြရရင် မုန့် ဟင်းခါးစားပြီးရင် မုန့် ဟင်းရည် အဆစ်တောင်းသောက်တာဟာ အစဉ်အလာပါ၊ ရောင်းတဲ့သူကလည်းစိတ်မဆိုးဘူး တောင်းတဲ့လူကလဲ ရှက်ကြောက်မနေဘူး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေပြေနဲ့ လက်ခံကျင့်သုံးလာတဲ့ အစဉ်အလာ(ထုံးစံ) တစ်ခုပါပဲ ဒီအစဉ်အလာ ကိုမည်သူက တီထွင်သွားပြီး မည့်သည့်အချိန်ကထဲက စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ် ဆိုတာ မည်သူမှ မပြောနိုင်ကြဘူး (ပညာရှင်တွေ စာတန်းပြုစုဖို့ ကောင်းတယ်နော) ဘာပဲဖြစဖြစ် ခုထိတော့ လက်ခံပြုလုပ်နေကြတုန်းပါပဲ...... အဲ..ဒီလိုပဲ ရုပ်ရှင်မှာလည်း လူမျိုးခြားအလိုက် မရိုးနိုင်သော အစဉ်လာအစွဲလေးတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ် ရယ်စရာလဲနည်းနည်းတော့ကောင်းပါတယ်......ပျော်ရတာပေါ့....
* မင်းသားဟာ အပြင်းထန်ဆုံး အရိုက်အနှက်ခံနေရချိန်မှာတောင် နာကျင်ပုံမပြပေမယ့် မင်းသမီးက အနာကို သန့်စင်ပြီးဆေးထည့်ပေးတဲ့ အခါမှာတော့ နာကျင်ပြီး တွန့်သွားတတ်ပါတယ်။
* မိတ်ကပ်တွေဟာလည်း တစ်ခါလိမ်းပြီးရင် မိုးရွာရွာ နေပူပူ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် ဒီအတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်။
* မင်းသားနဲ့မင်းသမီး ချစ်သူနှစ်ယောက် ကွင်းပြင်ထဲမှာ ကနေတုန်း ရုတ်တရက် (ဘယ်ကရောက်လာသလဲဆိုတာ ဘုရားပဲ သိနိုင်တဲ့) လူ(၁၀၀)လောက် ထွက်လာပြီး သူတို့နဲ့အတူ ၀င်ကလေ့ရှိပါတယ်။
* ဇာတ်သိမ်းခန်းကျရင် မင်းသားဟာ သူနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူဆိုးက သူ့အစ်ကိုဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ အိမ်ဖော်မိန်းမကြီးက သူ့အမေဖြစ်ကြောင်း၊ ရဲအရာရှိကြီးက သူ့အဖေဖြစ်ကြောင်း၊ တရားသူကြီးက သူ့ဦးလေးဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် ဖော်ထုတ်သိရှိသွားတတ်ပါတယ်။
* ရုပ်ရှင်ထဲက စကားတွေကြားမှာ ခပ်ကျယ်ကျယ်ပြောပြီး အများဆုံးညှပ်သုံးတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကတော့ "No Problem", "My God!", "Get Out!", "Shut Up!", "Impossible" နဲ့ "Please forgive me!" တို့ဖြစ်ပါတယ်။
* မင်းသား မင်းသမီးတွေဟာ သီချင်းဆိုနေတုန်းမှာပဲ မြေကြီးပေါ်လှဲချပြီး လူးလှိမ့်နိုင်သလို အ၀တ်အစားတွေလဲ အမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်ကြပါတယ်။
* သူတို့တွေဟာ အုန်းပင်တွေကြားမှာ ပြေးလွှားခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်း၊ မျက်တောင်များ ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ခြင်း၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖြတ်ကနဲ အကြည့်ချင်းဖလှယ်ခြင်း၊ အ၀တ်အစားလဲခြင်းများကို တပြိုင်ထဲမှာ လုံးဝမမောမပန်းဘဲ လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
* မင်းသားရဲ့ မိဘဖြစ်ရတဲ့သူတွေဟာ ကံမကောင်းတတ်ကြပါဘူး။ မင်းသားငယ်စဉ်ဘ၀မှာ ရန်သူတွေသတ်တာခံရပြီး မင်းသားက မိဘမဲ့ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
moethgyar community club :: Entertainments :: ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ အကြောင်းများ.... :: နိုင်ငံတစ်ကာ ရုပ်ရှင်